Igor Stasevich ingenye abadlali ethandwa iningi Belarus. Ngenxa yakhe ukuvela cishe angamakhulu amathathu amakilabhu ahlukahlukene. ukudlala kwakhe njalo wakhumbula abalandeli kanye football ongoti.
Mdlali njalo ubonisa amakhono Dribbling nokwethembeka ezivikela. Lokhu kwakumenza akwazi ukuthutha abe omunye wabadlali ezinkulu the club kanye eqenjini lesizwe.
Igor Stasevich wazalwa ngosuku lwamashumi amabili nanye Okthoba 1985 e Borisov. Silithande football kusukela ebuntwaneni. Wayedlala egcekeni, futhi ngokomzimba Ezifundweni esikoleni. Uyise wayengumGreki fan of football futhi wanquma ukunikeza indodana yakhe inombolo junior emidlalweni yesikole 2. Igor abaqeqeshiwe in a club zendawo iqhaza imincintiswano amateur. Umqeqeshi wakhe Victor Matusevich yabhekisela amakhono wale nsizwa. Lapho ngineminyaka engu-nesikhombisa Igor ukuthatha in a club football, "Bate". Wayedlala impinda. Abasebenzi abasha coaching ngokushesha kuqhakambisa umdlali ethembisa. amakhono Igor sikhule usuku ngalunye oludlulayo. Eminyakeni emibili kamuva wayesekwazi seziqalile ukusetshenziswa lakhe ubuqhawe Belarus.
Umgomo wakhe wokuqala Igor Stasevich kukora ngokumelene Minsk "Dynamo". Ngemva kokudlula ezikhungweni kusukela flank, wathuthela ibhola sikhungo, futhi wagijima endaweni isigwebo. Ngemva imizuzwana embalwa, ilungelo-emuva, "Bate" kwenziwa ekamelweni kusukela flank, kodwa ivaliwe yakhe Igor. Ngo isizini eyodwa nje, lo footballer abasha wakwazi ukuthola isizinda kuleli ithimba squad kuqala. On emkhakheni play mdlali ukukhumbula ukuzinikezela okusezingeni eliphezulu.
Yena njalo exhunywe kwi-ekuhlaseleni nethimba lakhe futhi ngokuvamile esembula lapho ibhola is wadlulela abaphikisi. ukukhula High ivumela Igor ukunqoba iningi Duels ugibele.
Ngo-2006, uhlu abadlali okuhle kwesizini uthola Igor Stasevich. Footballer wadonsela ukunakekela abalimi eziholayo amakilabhu Belarusian futhi Russian. Ngo-2008, ngokokuqala ngqa emlandweni club Belarusian esigabeni iqembu UEFA Champions League. "Bate" alwa ngokungajahi imizuliswano labafanelekako ngosizo Stasevich. Debut nekusebenta abangela isiyaluyalu esikhulu Belarus. Naphezu isimo sokuqala wangaphandle, Borisov club balwa kuze kube sekupheleni, futhi Igor Stasevich kwaba hero wangempela esigabeni iqembu. Esikhathini umdlalo ukubuya ngokumelene "Madoda ubudala" (eTurin club "Juventus") mdlali zisingethwe abethelwe ibhola ku net abaphikisi sika. Omunye umgomo kwaba esangweni le-Icelandic "Valur".
Ngo-2010 Igor Stasevich eya club Russian "iVolga". Ndawonye kanye naye wonke isizini iqembu uphatha ukuba singangeni ngenkani Premier League e-Russia. Ngemva kokuphela isizini wabuyela Belarus. Udlala "Homel" nokufana amathathu nambili amagoli amahlanu kuphela. Ngonyaka olandelayo, futhi sishintsha club, kulokhu Igor eya wedolobha elikhulu "Dynamo". Udlala isikhundla ehlasela mdlali. Naphezu akuphumelelanga zonyaka ezimbili, Stasevich esanda lwembula, okokuqala eziningi izikolo kusiza iqembu.
It udlala "Dynamo" kuze kube ngonyaka weshumi nane. Ngalesi isikhathi esichithwa ukufana ayisishiyagalombili eziyisikhombisa lapho kukora izikhathi eziyishumi nane. Ngenza eziningi ukusiza. Esikhathini "Dynamo" yaphenduka mdlali ukuzivikela futhi kwakuvame ukuba mdlali.
Ngemva kweminyaka emihlanu ezulazulayo emuva Borisov lwakubo, usayine inkontileka entsha "Bate".
Ukudlala eqenjini lesizwe futhi abalandeli abathanda
Iqembu lesizwe, Igor wachitha ukufana amabili nesikhombisa. Okokuqala ngaphandle enkundleni ngo-2007 ngokumelene ithimba Israeli. Futhi ngo-2009, ufake igoli lakhe kuphela eqenjini lesizwe emidlalweni olusemthethweni. Elokuqala Apreli wakwazi ukuphinde hit amasango eqenjini lesizwe Kazakhstan.
Abalandeli ngokuthi Igor Stasik ngenxa yokufana kwezingubo amagama abadlali bebhola elinegama elifanayo. Ngokuvamile, omunye wabadlali okuhle kwesizini e Belarus iba Igor Stasevich. "Fifa 16" wanezela ohlwini lwayo lwezindawo eziyiNgcebo football wasinikeza isilinganiso yokuqala 68.
Katya Strizhenova: Biography, umsebenzi nomkhaya okudala
Lukathayela ipayipi amanzi - ekahle omiswe esigabeni